Ihe ị ga-ahụ na Sri Lanka | Akụkọ Njem
Maria | | Sri Lanka, Asia njem
Họpụtara dị ka ebe njedebe nke 2019 site n'aka onye nkwusa a ma ama njem njem Lonely Planet, Sri Lanka bụ otu n'ime ebe kachasị adọrọ mmasị ịga leta na Asia. A maara ya dị ka "agwaetiti nke otu puku aha" n'ihi na n'akụkọ ihe mere eme ọ bụla ejiriwo ọtụtụ aha mara ya.
Enweghị ọtụtụ ihe kpatara ị ga-eji hụ Ceylon oge ochie n'anya dịka ọ bụ ebe na-agwakọta ugwu, osimiri na ọdịbendị. Ọ bụ jụụ, ọnụ ala na nchekwa agwaetiti na-erubeghị ndị njem nleta. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịga leta Sri Lanka n'ọdịnihu, lee ihe ị ga-ahụ na mgbe ị ga-aga.
1 Kedu mgbe ịkwaga Sri Lanka?
2 Otu esi agagharị na Sri Lanka
3 Ntinye chọrọ na Sri Lanka
4 Ihe ị ga-ahụ na Sri Lanka
Kedu mgbe ịkwaga Sri Lanka?
Sri Lanka nwere udu mmiri udu mmiri nke udu mmiri, nke mere ka ọ bụrụ ezi paradaịs ịnụ ụtọ afọ niile n'afọ. Agbanyeghị, oge kachasị mma iji gaa bụ n’etiti ọnwa Disemba na Eprel ka oke mmiri ozuzo dakwasịrị ndịda agwaetiti ahụ n’agbata Mee na Ọgọstụ na ugwu site n’etiti Ọktoba na Nọvemba.
N’iburu nke a, ihe kachasị mma bụ ịme atụmatụ njem a dabere na ebe anyị chọrọ ịma ma ọ bụ mmemme anyị kpebiri ime. Ihe ọzọ ị ga-eburu n’uche bụ mmefu ego, ya bụ, n’ọbara dị elu (Disemba-Machị) ọnụahịa gafere n’elu ụlọ ebe ọnụ ala dị ala (Mee-August) dị ọnụ ala. Oge dị mma iji gaa Sri Lanka n'onwe gị na enweghị ndoputa oge bụ oge dị n'etiti Eprel na Nọvemba, nke anyị nwere ike ịtụle oge ọkara.
Otu esi agagharị na Sri Lanka
Ationgbọ njem na-esikwu ike ịhazi. Agbanyeghi na enwere ezigbo uzo, ntuziaka na-adụ ọdụ mgbe niile ịgbazite ụgbọ ala n'ihi ụzọ dị iche iche nke ndị Sri Lanka. N'obodo, a na-atụ aro ka ị kwaga tuk-tuk ma ọ bụ were onye ọkwọ ụgbọ ala nke onwe ya ka ọ kpọga anyị ebe ebe ụfọdụ ụzọ ị ga-esi were ọtụtụ bọs, nke nwere ike ịdị nwayọ nwayọ, jupụta ma mgbe ụfọdụ ọ siri ike ịmata ebe enwere ụlọ ọrụ. Ma, ha dị ọnụ ala. N'okwu a, ọ kachasị mma ịkpọtụrụ ebe ị na-anọ ka ha wee nwee ike ịgwa gị n'ụzọ zuru ezu ebe ọ bụ na ọ bụghị mgbe niile ka gọọmentị na-akwụsị, ọdụ ma ọ bụ usoro nhazi.
Banyere ụgbọ okporo ígwè, ọ bụ ụzọ kachasị mma isi agagharị. Nyere otutu nnabata nke ndị njem, ọ dịghị mfe ịnweta tiketi iji gaa nọdụ yabụ ọ ga-adị mma ma ị gbalịa ịzụta ụzọ gasị n'obodo izizi ị gara.
Ntinye chọrọ na Sri Lanka
Iji gaa Sri Lanka ọ dị mkpa iburu paspọtụ nwere ikike kachasị dịkarịa ala nke ọnwa isii na visa. Agbanyeghị na enwere ike ijikwa ya mgbe ị bịarutere na ọdụ ụgbọ elu dị ka Ministry of Foreign Affairs, ọ ka mma ijikwa ya na ntanetị iji zere igbu oge na ntinye ma ọ bụ nsogbu ọ bụla ọzọ.
Ọ dị mfe ịnweta mkpuchi nke na-ekpuchi azụ anyị maka ihe ọghọm, mmefu ahụike, mbughachi ma ọ bụ ọnwụ na izu ohi nke akpa, na nsogbu ndị ọzọ.
Mgbe anyị gara Sri Lanka, njem izu abụọ ga-eme ka anyị hụ ebe kacha mma n'àgwàetiti ahụ n'udo. Ugbu a, gịnị ka ịmara na Sri Lanka?
Firstbọchị mbụ ị kpọtụrụ Sri Lanka bara uru ileta ebe etiti akụkọ ihe mere eme nke isi obodo. Ọ bụ ọnụ ụzọ ámá mba Eshia na obodo kachasị nwee ọnụ na mba ahụ.
Enwere ike ịhụ oge gara aga nke ọchịchị ya na Negombo Fortress, nke ndị Dutch wuru na 1644. N'ezie, ọnụ ụzọ mbata mbụ nke malitere na narị afọ nke XNUMX ka nwere ike ịhụ taa. Ebe ndị ọzọ nwere mmasị bụ ụlọ elekere elekere, mgbidi elu, na osisi dị nsọ nke Eze Valagamba kụrụ, nke e si Anuraghapura weta.
N'otu mpaghara nke Colombo ị nwekwara ike ịchọta thelọ Queen, ebe obibi nke Onye isi ala Sri Lanka na ụdị ụlọ ndị ọzọ. Iji mụta banyere akụkụ a nke akụkọ ihe mere eme nke mba na ndị ọzọ, ọ dịghị ihe dị mma karịa ịga na National Museum, ebe ị nwere ike ịhụ nnukwu nchịkọta ihe site na oge dị iche iche.
Ebe ọzọ na-adọrọ mmasị na Colombo bụ Galle Face Green, njem mkpagharị na ọmarịcha echiche nke osimiri na oke osimiri.
N'ime obodo agwaetiti a, Kandy bụ otu n'ime obodo kachasị mkpa na mba ahụ. Akpọrọ ya Ebe Nketa Worldwa na ọ bụ obodo dị nsọ maka okpukpe Buddha na njem nleta dị mkpa. Isi ihe ncheta ya bu Dalada Maligawa nke okpukpe, nke nwere ulo kachasi nsọ n’obodo dum.
N'ime Dalada Maligawa bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa Buddhist, ezé Gautama Buddha nọ na requary edebe n'ụlọ nsọ nke Buddha eze. Na gburugburu ya dị Udawatte Kelle, nnukwu ohia nke ebe okpomọkụ a na-ewere dị ka ebe nsọ dị egwu ebe ọ na-atọ ụtọ ịga ije ma nwee obi iru ala.
Ebe ọzọ dị mkpa iji gaa na Kandy, Sri Lanka, bụ andlọ Ọrụ Arts na Crafts. N'ime ya nwere ọmarịcha ọrụ aka nke na-egosi ụdị ọdịnala Sri Lanka.
Ọ bụ ugwu mgbawa oge ochie dị n’etiti otu nnukwu larịị nke nwere otu n’ime ebe mmụta ihe ochie kachasị mma n’ụwa. Achọpụtara ya na mbido narị afọ nke XNUMX ma were ya dị ka otu n'ime ihe ịtụnanya ụwa.
Nkume a karịrị mita 200 n'ịdị elu ma n'ime afọ ndị ọzọ ọ kwaturu ya ruo mgbe o yiri ka a ga-edetu ya na mbara ọzara nke osisi jupụtara. N'elu oke nkume nke Sigiriya bụ mkpọmkpọ ebe nke obí eze n'etiti mkpọmkpọ ebe kachasị pụta bụ ụkwụ ọdụm nke nnukwu ọdụm nke ọnụ ya bụ ụzọ mbata na steepụ nke dugara n'elu.
Na ala, enwerekwa ihe ochie nke obere ụlọ, olulu nchebe nke chebere obodo na ubi.
Ekwuru na Galle bu obi colonial nke agwaetiti a dika o bu ihe omuma atu zuru oke nke ebe ewusiri ike nke Europe na ndida nke ndida. Ọ bụ otu n'ime ọdụ ụgbọ mmiri kachasị mkpa na Ceylon oge ochie ruo ọtụtụ narị afọ maka ịzụ ngwa nri, tii na ngwaahịa ndị ọzọ. E kwupụtara ya dị ka ihe nketa ụwa.
Fort Galle bụ ebe ndị Dutch wuru mgbe ha chụpụrụ ndị Portuguese na nke bụ na etiti obodo ahụ mere ihe akụkọ. N'ime ụlọ e nwere ọtụtụ ụlọ nri, ebe a na-echekwa ihe ncheta, ejiji na ebe ngosi ihe mgbe ochie. Galle, nke di 100 kilomita site na Colombo, bu ebe di nma iji mechie okirikiri na Sri Lanka,
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » Ihe ị ga-ahụ na Sri Lanka